12.11.20 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“ मीठे बच्चे– बाबाले जे पढाउनु हुन्छ , त्यसलाई राम्रोसँग पढ्यौ भने यो २१ जन्मको लागि आम्दानीको स्रोत हुन्छ , सदा सुखी बन्छौ।”
तिमी बच्चाहरूको अतीन्द्रिय सुखको गायन किन छ?
किनकि तिमी बच्चाहरूले नै यस समयमा बाबालाई चिनेका छौ। तिमीले नै बाबाद्वारा सृष्टिको आदि, मध्य, अन्त्यलाई जानेका छौ। तिमी अहिले संगममा बेहदमा खडा छौ। जानेका छौ– अहिले हामी यस नुनिलो सागरबाट अमृतको मीठो सागरमा गइरहेका छौं। हामीलाई स्वयं भगवानले पढाइरहनु भएको छ, यस्तो खुसी ब्राह्मणहरूलाई नै हुन्छ त्यसैले अतीन्द्रिय सुख तिम्रो नै गायन गरिएको छ।
रूहानी बेहदको बाबाले रूहानी बेहदका बच्चाहरूप्रति सम्झाइरहनु भएको छ अर्थात् आफ्नो मत दिइरहनु भएको छ। यो त अवश्य सम्झन्छौ– हामी जीव आत्माहरू हौं। तर आफूलाई आत्मा निश्चय गर्नु छ नि। यो हामीले कुनै नयाँ स्कुलमा पढ्दैनौं। हर ५ हजार वर्षपछि पढ्दै आएका छौं। बाबा सोध्नुहुन्छ नि– पहिला कहिले पढ्न आएका थियौ? अनि सबैले भन्छन्– हामी हर ५ हजार वर्षपछि पुरुषोत्तम संगमयुमा बाबाको पासमा आउँछौं। यो त याद छ नि, या यो पनि बिर्सेका छौ? विद्यार्थीलाई स्कुल त अवश्य याद आउँछ नि। लक्ष्य-उद्देश्य त एउटै छ। जति पनि बच्चाहरू बन्छन् फेरि २ दिनको बच्चा होस् या पुराना होस्, लक्ष्य-उद्देश्य एउटै छ। कसैलाई पनि घाटा हुन सक्दैन। पढाइमा कमाई हुन्छ। उनले पनि ग्रन्थ बसेर पढेर सुनाउँछन् भने कमाई हुन्छ, झट्ट शरीर निर्वाह हुन्छ। साधु बन्यो, एक-दुई वटा शास्त्र बसेर सुनायो, कमाई हुन्छ। यो सबै सोर्स अफ इनकम हो। हरेक कुरामा इनकम हुनुपर्छ नि। पैसा छ भने कहीं पनि घुमफिर गरेर आऊ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– बाबाले हामीलाई धेरै राम्रो पढाइ पढाउनु हुन्छ जसबाट २१ जन्मको इनकम मिल्छ। यो इनकम यस्तो छ जसद्वारा हामी सदा सुखी बन्छौ। कहिल्यै बिरामी हुँदैनौं, सदा अमर रहन्छौ। यो निश्चय गर्नुपर्छ। यस्तो यस्तो निश्चय राखेमा तिमीलाई उल्लास आउँछ। नत्र कुनै न कुनै कुरामा अत्तालिइरहन्छौ। भित्र स्मरण गर्नुपर्छ– हामीले बेहदको बाबासँग पढिरहेका छौं। भगवानुवाच– यो त गीता हो। गीताको पनि युग आउँछ नि। केवल बिर्सेका छन्– यो हो पाँचौं युग। यो संगम धेरै छोटो छ। वास्तवमा चौथाई पनि भनिदैन। प्रतिशत लगाउन सकिन्छ। त्यो पनि पछि गएर बाबा बताइरहनु हुन्छ। केही त बाबाले बुझाउने पनि निश्चित छ नि। तिमी सबै आत्माहरूमा निश्चित पार्ट छ जुन रिपीट भइरहेको छ। तिमी जे सिक्छौ त्यो पनि रिपीटेशन हो नि। रिपीटेशनको रहस्य पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा भएको छ। कदम-कदममा पार्ट परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ। एक सेकेण्ड मिल्दैन अर्को सेकेण्डसँग। जुम्रा जस्तै टिक-टिक चलिरहन्छ। टिक भयो सेकेण्ड पास भयो। अहिले तिमी बेहदमा खडा छौ। अरू कोही पनि मनुष्य बेहदमा खडा छैनन्। कसैलाई पनि बेहदको अर्थात् आदि, मध्य, अन्त्यको ज्ञान छैन। अहिले तिमीलाई भविष्यको बारेमा पनि थाहा छ। हामी नयाँ दुनियाँमा गइरहेका छौं। यो हो संगमयुग, जसलाई पार गर्नु छ। नुनिलो सागर हुन्छ नि। यो हो मीठो अमृतको सागर। त्यो हो विषको। अहिले तिमी विषको सागरबाट क्षीर सागरमा जान्छौ। यो हो बेहदको कुरा। दुनियाँमा यी कुराको विषयमा केही पनि थाहा छैन। नयाँ कुरा हो नि। यो पनि तिमीले जानेका छौ– भगवान कसलाई भनिन्छ। उहाँले के पार्ट खेल्नु हुन्छ? कुनै टपिकमा पनि बताउँछौ-आएर परमपिता परमात्माको बायोग्राफी बुझ्नुहोस्। हुन त बच्चाहरूले आफ्नो पिताको बायोग्राफी सुनाउँछन्। यो कुरा कमन हुन्छ। यहाँ त फेरि पिताहरूका पिता हुनुहुन्छ नि। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। अब तिमीले यथार्थ रीतिले बाबाको परिचय दिनु छ। तिमीलाई पनि यो समझ बाबाले दिनुभएको छ त्यसैले त सम्झाउँछौ, अरू त कसैले बेहदको बाबालाई चिन्न सक्दैन। तिमीले पनि संगममा नै चिनेका छौ। मनुष्य मात्र चाहे देवता हुन् वा शूद्र हुन्, पुण्य आत्मा हुन्, पाप आत्मा हुन्, कसैले पनि चिनेका छैनन्, केवल तिमी ब्राह्मण जो संगमयुग छौ, तिमीले नै चिनिरहेका छौ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ। त्यसैले त गायन पनि छ– अतीन्द्रिय सुख सोध्नु छ भने गोप-गोपीहरूसँग सोध।
बाबा, बाबा पनि हुन्छ, टिचर, सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ, सुप्रीम शब्द त अवश्य राख्नु छ। कहिलेकाहीँ बच्चाहरूले भुल्छन्। यो सबै कुरा बच्चाहरूको बुद्धिमा रहनु पर्छ। शिवबाबाको महिमामा यो शब्द अवश्य राख्नु पर्छ। तिमी सिवाय अरू त कसैले जानेकै छैनन्। तिमीले सम्झाउन सक्छौ अर्थात् तिम्रो विजय भयो नि। तिमीले जानेका छौ– बेहदका बाबा सर्वका शिक्षक, सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। बेहदको सुख, बेहदको ज्ञान दिनेवाला हुनुहुन्छ। फेरि पनि यस्तो बाबालाई बिर्सिन्छौ। माया कति समर्थ छ। ईश्वरलाई त समर्थ भन्छन् तर माया पनि कम छैन। तिमी बच्चाहरूले अहिले एक्युरेट जानेका छौ– यसको त नाम नै राखिएको छ रावण। रामराज्य र रावण राज्य। यसमा पनि एक्युरेट सम्झाउनु पर्छ। राम राज्य हुन्छ भने अवश्य रावण राज्य पनि हुन्छ। सदैव रामराज्य त हुन सक्दैन। राम राज्य, श्रीकृष्णको राज्य कसले स्थापना गर्छ, यो बेहदको बाबा बसेर सम्झाउनु हुन्छ। तिमीले स्वर्गको धेरै महिमा गर्नुपर्छ। सृष्टि सचखण्ड थियो, कति महिमा थियो। बनाउने बाबा नै हुनुहुन्छ। तिम्रो बाबासँग कति लभ छ। लक्ष्य-उद्देश्य बुद्धिमा छ। यो पनि जानेका छौ– हामी विद्यार्थीलाई आफ्नो पढाइको नशा हुनुपर्छ। चरित्रको पनि ख्याल हुनुपर्छ। विवेकले भन्छ– ईश्वरीय पढाइ हो त्यसैले यसमा एक दिन पनि मिस गर्नु हुँदैन र टिचर भन्दा लेट पनि पुग्नु हुँदैन। टिचर भन्दा पछि आउनु– यो पनि एक इनसल्ट हो। स्कुलमा पनि पछि आए भने उनलाई टिचरले बाहिरै उभ्याइदिन्छन्। बाबाले आफ्नो बाल्यकालको उदाहरण पनि बताउँछन्। हाम्रो टिचर त धेरै कडा थिए। भित्र पस्न पनि दिँदैनथे। यहाँ त धेरै छन् जो ढीलो आउँछन्। सेवा गर्ने सपूत बच्चा अवश्य बाबालाई प्यारो लाग्छ नि। अहिले तिमीले बुझेका छौ– आदि सनातन देवी देवता धर्म त थियो नि। यो धर्म कहिले स्थापना भयो? अलिकति पनि कसैको बुद्धिमा छैन। तिम्रो बुद्धिबाट पनि घरी-घरी खस्कन्छ। तिमीले अहिले देवी देवता बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। कसले पढाइरहनु भएको छ? स्वयं परमपिता परमात्मा। तिमीले सम्झन्छौ– हाम्रो यो ब्राह्मण कुल हो। डिनायस्टी हुँदैन। यो हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। बाबा पनि सर्वोत्तम हुनुहुन्छ नि। उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ त्यसैले अवश्य उहाँको आम्दानी पनि उच्च हुनुपर्छ। उहाँलाई नै श्री श्री भनिन्छ। तिमीलाई पनि श्रेष्ठ बनाउनु हुन्छ। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ– हामीलाई श्रेष्ठ बनाउने को हुनुहुन्छ? अरूले केही पनि बुझ्दैनन्। तिमीले भन्छौ– हाम्रो बाबा, बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि हुनुहुन्छ, सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ, पढाइरहनु भएको छ। हामी आत्माहरू हौं। हामी आत्माहरूलाई बाबाले स्मृति दिलाउनु भएको छ। तिमी मेरा सन्तान हौ। भाइ-भाइ हौ नि। बाबालाई याद पनि गर्छन्। सम्झन्छन्– उहाँ निराकारी बाबा हुनुहुन्छ त्यसैले अवश्य आत्मालाई पनि निराकार नै भनिन्छ। आत्माले नै एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ। फेरि पार्ट खेल्छ। मनुष्यले फेरि आत्माको सट्टा आफूलाई शरीर सम्झन्छन्। म आत्मा हुँ, यो भुल्छन्। मैले कहिल्यै बिर्सिन्नँ। तिमी आत्माहरू सबै हौ शालिग्राम। म हुँ परमपिता मतलब परम आत्मा। उहाँ भन्दा माथि कोही अर्को नाम छैन। उहाँ परम आत्माको नाम हो शिव। हौ तिमी पनि यस्तै आत्मा तर तिमीहरू सबै शालिग्राम हौ। शिवको मन्दिरमा जान्छौ, त्यहाँ पनि शालिग्राम धेरै राख्छन्। शिवको पूजा गर्दा शालिग्रामको पनि साथैमा गर्छन् नि। बाबाले सम्झाउनु भएको थियो– तिम्रो आत्मा र शरीर दुवैको पूजा हुन्छ। मेरो त केवल आत्माको नै हुन्छ। शरीर छँदै छैन। तिमी कति उच्च बन्छौ। पितालाई त खुसी हुन्छ नि। पिता गरिब हुन्छ, बच्चाहरू पढेर कति माथि पुग्छन्। केबाट के बन्छन्। बाबाले पनि जान्नुहुन्छ– तिमी कति उच्च थियौ। अब कति अनाथ बन्यौ, बाबालाई नै चिनेका छैनन्। अहिले तिमी बाबाको बनेका छौ त्यसैले सारा विश्वको मालिक बन्छौ।
बाबा भन्नुहुन्छ– मलाई भन्छन् पनि– हेभनली गड फादर। यो पनि तिमीले जानेका छौ– अहिले स्वर्गको स्थापना भइरहेको छ। त्यहाँ के-के हुन्छ– यो तिम्रो सिवाय अरू कसैको बुद्धिमा छैन। तिम्रो बुद्धिमा छ– हामी विश्वको मालिक थियौं, अब बनिरहेका छौं। प्रजाले पनि यस्तै भन्छन् नि– हामी मालिक हौं। यो कुरा तिमी बच्चाहरूको नै बुद्धिमा छ त्यसैले खुसी हुनु पर्छ नि! यो कुरा सुनेर फेरि अरूलाई पनि सुनाउनु छ, त्यसैले सेन्टर वा म्युजियम खुल्दै जान्छन्। जो कल्प पहिला भएको थियो त्यही भइरहन्छ। म्युजियम, सेन्टर आदिको लागि तिमीलाई धेरै अफर गर्नेछन्, फेरि धेरै निस्किन्छन्। सबैको हड्डी (घमण्ड) नरम हुँदै जान्छ। सारा दुनियाँको अब तिमीले हड्डी नरम गर्दै जान्छौ। तिम्रो योगमा कति बेजोड तागत छ। बाबा भन्नुहुन्छ– तिमीहरूमा धेरै तागत छ। भोजन तिमीले योगमा रहेर बनाऊ, खुवाऊ अनि बुद्धि यस ज्ञान तर्फ खिँच्छ। भक्ति मार्गमा त गुरुहरूको जुठो पनि खान्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– भक्ति मार्गको विस्तार त धेरै छ, त्यसको वर्णन गर्न सकिँदैन। यो बीज, त्यो वृक्ष हो। बीजको वर्णन गर्न सकिन्छ। बाँकी कसैलाई भन– रुखको पातहरू गन्ती गर भनेमा गर्न सक्दैनन्। अथाह पातहरू हुन्छन्। बीजमा त पातहरूको निशानी देखिदैन। आश्चर्य छ नि। यसलाई पनि प्रकृतिको लीला भनिन्छ। जीव-जन्तु कति अद्भुत छन्। अनेक प्रकारका कीरा छन्, कसरी पैदा हुन्छन्, धेरै अद्भुत ड्रामा हो, यसलाई भनिन्छ नै नेचर। यो पनि बनिबनाउ खेल हो। सत्ययुगमा के-के देख्छौ। त्यो पनि नयाँ चीजहरू नै हुन्छन्, एभरीथिंग न्यु हुन्छ। मयुरको लागि त बाबाले सम्झाउनु भएको छ– यसलाई भारतको राष्ट्रिय चरा भन्छन् किनकि श्रीकृष्णको मुकुटमा मयुरको प्वाँख देखाउँछन्। मयुर र डेल धेरै सुन्दर पनि हुन्छन्। भनाइ छ– गर्भ पनि आँसुबाट हुन्छ, त्यसैले राष्ट्रिय चरा भन्छन्। यस्तो सुन्दर पक्षी बेलायततर्फ पनि हुन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई सारा सृष्टिको आदि, मध्य, अन्त्यको रहस्य सम्झाएको छु, जुन अरू कसैले जानेका छैनन्। भन, हामी तपाईंलाई परमपिता परमात्माको बायोग्राफी बताउँछौं। रचयिता हुनुहुन्छ त्यसैले अवश्य उहाँको रचना पनि हुन्छ। उहाँको इतिहास-भूगोल हामीलाई थाहा छ। उच्च भन्दा उच्च बेहदको बाबाको के पार्ट छ– यो हामीलाई थाहा छ, दुनियाँले त केही पनि जानेका छैनन्। यो धेरै फोहोरी दुनियाँ हो। यस समय सुन्दरतामा पनि समस्या छ। बच्चीहरूलाई हेर कसरी-कसरी भगाएर लैजान्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई यस विकारी दुनियाँबाट त घृणा हुनुपर्छ। यो फोहोरी दुनियाँ, फोहोरी शरीर हो। हामीले त अब बाबालाई याद गरेर आफ्नो आत्मालाई पवित्र बनाउनु छ। हामी सतोप्रधान थियौं, सुखी थियौं। अहिले तमोप्रधान बनेका छौं त्यसैले दु:खी छौं फेरि सतोप्रधान बन्नु छ। तिमी चाहन्छौ– हामी पतितबाट पावन बनौं। हुन त गायन गर्छन्– पतित-पावन तर घृणा केही पनि आउँदैन। तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ– यो फोहोरी दुनियाँ हो। नयाँ दुनियाँमा हामीलाई शरीर पनि सुन्दर मिल्छ। अहिले हामी अमरपुरीको मालिक बनिरहेका छौं। तिमी बच्चाहरू सदैव खुसी , हर्षितमुख रहनु पर्छ। तिमी धेरै स्वीट चिल्ड्रेन हौ। बाबा ५ हजार वर्षपछि उनै बच्चाहरूसँग आएर मिल्नुहुन्छ। त्यसैले अवश्य खुसी हुन्छ नि। म फेरि आएको छु, बच्चाहरूसँग मिल्न। अच्छा!
१) हामी ईश्वरीय विद्यार्थी हौं, त्यसैले पढाइको नशा पनि रहोस्, अनि आफ्नो चरित्रमा पनि ध्यान रहोस्। एक दिन पनि पढाइ मिस गर्नु हुँदैन। ढिलो क्लासमा आएर टिचरको अनादर गर्नु हुँदैन।
२) यस विकारी फोहोरी दुनियाँसँग घृणा राख्नु छ, बाबाको यादबाट आफ्नो आत्मालाई पवित्र, सतोप्रधान बनाउने पुरुषार्थ गर्नु छ। सदैव खुसी, हर्षितमुख रहनु छ।
अन्तःवाहक शरीरद्वारा सेवा गर्ने कर्मबन्धन मुक्त डबल लाइट भव
जसरी स्थूल साकारी शरीरद्वारा ईश्वरीय सेवामा व्यस्त रहन्छौ, त्यसैगरी आफ्नो आकारी शरीरद्वारा अन्तःवाहक सेवा पनि साथसाथै गर्नु छ। जसरी ब्रह्माद्वारा स्थापनाको वृद्धि भयो, त्यसैगरी अब तिम्रो सूक्ष्म शरीरद्वारा, शिव शक्तिको संयुक्त रूपको साक्षात्कारद्वारा साक्षात्कार र सन्देश मिल्ने कार्य हुनु छ। तर यस सेवाको लागि कर्म गर्दा कुनै पनि कर्मबन्धनबाट मुक्त सदा डबल लाइट रूपमा रहने गर।
मानको त्यागमा सबैको माननीय बन्ने भाग्य समाहित छ।